Russell Ledet wuxuu ahaa waardiye maantana wuxuu bartaa dhakhtarnimo - BBC News Somali
Russell Ledet wuxuu ahaa waardiye maantana wuxuu bartaa dhakhtarnimo
Xigashada Sawirka, Submitted photo
Nin horay isbitaal waardiya ugu ahaa ayaa ku soo laabtay isbitaalki uu ka shaqeynayey, balse markan wuxuu ahaa arday dhakhtarnimo barta.
11 sana ka hor, Russell Ledet oo ay hadda da'diisu 34 jir tahay wuxuu waardiye ka ahaa isbitaalka guud ee Baton Rouge General Medical Center.
Hadda, ninki horay uga tirsanaa sirdoonka ciidamada badda ee waardiyaha soo noqday maanta wuxuu haystaa shahaadada PHD wuxuuna ka shaqeeyaa Jaamacadda Tulane ee ku taalla gobolka Louisiana uu Russel ka soo jeedo.
"Waa riyo rumoowday" ayuu yiri mar uu BBC u warramayey.
Sheekada guusha uu ninkan gaaray ku saabsan ayaa waxay noqotay hadal haynta ugu weyn kaddib marki sawirrada 15 arday oo madow ah oo dhakhtarnima barata uu isugu keenay madxafka weyn ee addoonsiga ee ku yaalla Louisiana.
Sawirqaadahana wuxuu ujeedkiisu ahaa shirkad uu ugu magac daray 15 White Coats oo uu dhaqaale ugu raadiyo ardayda dhakhtarnimada barata ee ka soo jeedda bulshooyinka laga tirada badan yahay. Waxayna 15-ka dhakhtar ee madowga ah sawirradooda oo la weyneeyey ay gaarsiiyeen dhammaan iskuulladda ku yaalla dalka Mareykanka si ay ugu dhiirrageliyaan dhakhaatiirka madowka ee jiilka soo socda.
"Haddaad iskudaydo inaad ilmaha yar ee madwga ah weydiiso dhakhtarku waxa uu u ugyahay waxay kuu sheegayaan nin caddaan ah. Si aan taa u beddelno waa inaan tusnaa riyo rumoobi karta," ayuu yiri Ledet oo BBC u warramay.
Xigashada Sawirka, The 15 White Coats
Sawirka 15 arday madow ah oo dhakhtarnima barata oo hortaagan goob addoonsigi hore lagu xasuusto oo ku talla beerta Whitnet
Mr Ledet wuxuu ku soo koray magaalada Lake Charles iyada oo ay hooyadii soo korsatay, balse weligii kuma fikirin inuu jaamacad galo balse muddo kaddib wuxuu qaatay shahaadada PHD isaga oo dhakhtarnimo iyo cilmi kalaba isku darsaday.
Carruurnimadiisi wuxuu xusuustaa isaga iyo walaashii oo qashinka gura si ay u helaan lacag ay cunto ku iibsadaan.
"Marki aan yaraa waxaan u maleyn jiray dadka taajiriinta oo keli ah iney jaamacad galaan," ayuu yiri.
dugsi sare markuu gaarayna wuxuu qortay ciidamada badda maadaamaa aysan "fursad kale u muuqan".
Askari ayuu ahaa marka uu billaabay inuu la kulmo dad tusay inuu noolasha guul uu ka gaari karo, waxbarashada ciidankana wuxuu ka billaabay Washington Dc kaddibna wuxuu ka sii watay Pensacola, ee gobolka Florida, isaga oo noqday farsama yaqaan fasiraadda cilmiga luuqadaha dadbadan ee ay ciidamadu adeegsadaan ka shaqeeya.
Awoodda jacaylka: Kal-kaaliso iyo dhakhtar arooskoodu ka dhacay isbitaalkii ay ka shaqeynayeen
"Waxaan billaabay inaan ogaado dunida aan ku nool nahay iney aad uga weyn tahay halkan aan aniga ka imid," ayuu yiri.
Pensacola waxay ku kulmeen xaaskiisa, uu ku tilmaamay iney ahayd mid had iyo jeer ku dhiirragelin jirtay inuu waxbarto.
"Xaaskeyga waxay igu odhan jirtay sida "waad caqli badan tahay balse weli ma ogid oo kale," isaga xusuusanayo.
Dhowr sano marka uu ciidamada badda ka tirsanaa, ayuu marki dambe isaga tagay isaga iyo xaaskiisana qoys ayey yagleeleen oo waxaa u billaabatay noolal lammaane.
Waxayna 2009-kii u guureen Baton Rouge, Louisiana isaga oo iska diiwaangeliyey Jaamacadda Southern iyo Kulliyadda A&M, oo ay dadka madowga ah wax bartaan.
Wuxuuna helay deeq waxbarasho oo dhammeystiran, balse shaqadiisana waa u watay si uu riyadiisa uu u u rumeeyo, isaga oo waardiye ka noqday Xaruunta caafimaadka ee Baton Rouge. Maalinti gelinka hore jaamacadda ayuu wax ka baraneyey gelinka dambe ilaa habeenkina waxbarashadisa ayuu ku mashquulayey.
Sabtida marka ay shaqada u dhammaatana, habeenki oo dhan wuxuu u sii guueyn jiray Pensacola, halkaasi oo u ahayd keydka noolashiisa.
Haweeney diidday in dhakhtar aan "caddaan ahayn" uu daweeyo wiilkeeda
Isaga oo howlahaasi oo dhan ku jira waxaa u dhalatay gabadhi ugu horreysay, waxayna gabadha qoyskiisa ku soo biirtay ku kalliftay inuu xoogga saaro sidi uu shahaadada koobaad uu u dhammeysan lahaa si uu u helo shaqo mushaar fiican leh.
Kaddibna wuxuu ku biiray jaamacadda New York si uu shahaadada PHD uu uga qaato.
"Waxbarashadi oo dhanna waan dhammeeyey, waxaanna isidhi wax badan ayaad qaban kartaa. Adduunkina wuxuu ii noqday mid wajiga ii soo jeediyo," ayuu yiri.
Gabdhiisa labaadna waxay dhalatay 20-ka bisha Febraayo, 2018-kii isla-maalintaasina waxaa soo gaaray war farxadleh oo ah inuu aqbalay dugsiga dhakhtarnimada lagu barto ee ka tirsan Jaamacadda Tulane iyada oo ay jaamacadduna siisay deeq waxbarasho oo dhammeystiran.
Gabadha yar oo ciyaar ku soo bandhigtay ololihi Washington DC ka socday ee looga magacdaray Black Live Matter
Marka uu ku laabtay xaruunta caafimaadka ee Baton Rouge bishii July isaga oo ah arday dhigto dhakhtarnimo wuxuu la kulmay mas'uulkiisi hore oo uu Mr Ledet sheegay inuu caawiyey oo shaqada uu ka eryin xilligi uu waxbarashada iyo shaqada waardiyanimada isku waday, iyada oo shaqana ay u taallo.
Mr Ledet wuxuu sheegay waxbarshada kaddib inuu ku shaqeeyo dhakhtarka carruurta iyo kan maskaxda si uu ugu adeego bulshada saboolka ah ee aan heleyn fursad inay kula kulmaan dhakhaatiirta maskaxda.
Rajadiisa iyo guusha uu noolasha ka gaarayna waxay dhiirra gelineysaa dhalinyarada kale ee madwga ah ee ku nool Mareykanka.
"Markaad ka timaaddo halkan aan anigu ka imid, cidna kuu sheegi meyso inaad dunida wax ku soo kordhin kartid," ayuu yiri. "Haddii ay cidna wax kuu sheegin waxba ma garan kartid. Balse, maanta aniga ayaa waxbadan og oo carruurta yaryar u sheegaya."
Waxaa loo heystaa in uu sumeeyay bukaanno garaayo 17